के होम आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन स्थायी हो? होम आईपीएल कपाल हटाउन अन्तिम कति लामो हुन्छ? - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
के होम आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन स्थायी हो? होम आईपीएल कपाल हटाउन अन्तिम कति लामो हुन्छ?
समय: 2019-10-29 हिट्स: 171
आज, शेन्जेन नोबलले घर ipl कपाल हटाउने उपकरण दुई पक्षबाट स्थायी depilation हासिल गर्न सक्छन् कि भनेर जान्न हुनेछ? स्थायी कपाल हटाउन कहिले सम्म रहन सक्छ?
कपाल हटाउन को लागी सबै भन्दा प्रभावकारी विधि Intense Pulsed Light (आईपीएल) कपाल हटाउने उपचार हो, जुन प्राय जसो आश्चर्यजनक कार्य गर्दछ। यसले कुनै पनि अन्य कपाल हटाउने विधिहरू भन्दा स्थायी परिणाम दिन्छ र शरीरको कुनै पनि भागमा कपालको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कपाल हटाउने लामो समयदेखि धेरैको चिन्ताको विषय बनेको छ, कपाल हटाउने विभिन्न विधिहरू जस्तै ट्वाइजेज, वाक्सिंग, वा दाह्री खौरने। तर ती सबै समस्याहरूको लागि ती विकल्पहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प भनेको उन्नत कपाल हटाउने विधि, होम आईपीएल कपाल हटाउने हो। यो सबै अन्य विधाहरूको तुलनामा लगानीको लायक उपचार हो र उत्तम परिणामहरू दिन्छ।
जहाँसम्म, होम आईपीएल कपाल हटाउने उपचारको लागि अपेक्षाहरू सेट गर्नु अघि, यो कसरी बुझ्ने प्रक्रिया कसरी कार्य गर्दछ र यसबाट के आशा गर्ने परिणामहरू बुझ्न आवश्यक छ। जबकि होम आईपीएल कपाल हटाउन को लागी कपाल हटाउने को कुनै पनि अन्य तरिकाहरु भन्दा अधिक स्थायी परिणामहरु छन्, तर यसको प्रभावकारिता र परिणामहरु मान्छे फरक फरक हुन्छन् र अन्य कारकहरु मा निर्भर गर्दछ साथ साथै आनुवंशिकी, कपालको रंग, छालाको टोन, चिकित्सा अवस्था वा हार्मोनल असंतुलन शरीरमा।
अनावश्यक कपालमा स्थायी कमी
कपाल हटाउनको लागि एक व्यावहारिक विधि होम आईपीएल कपाल हटाउने उपचार हो किनकि यसले अनावश्यक कपालहरूको स्थायी कमी गर्नमा मद्दत गर्दछ। परिणामहरू प्रभावकारी छन्, तर यसको मतलब यो होइन कि होम आईपीएल कपाल हटाउने १००% स्थायी हो। यो केवल एक सत्र पछि होम आईपीएल कपाल हटाउने प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न गाह्रो छ; यद्यपि सफलता पूर्ण उपचारको क्रम पछि मात्र देखिन्छ (सत्रहरूको आवश्यक संख्या)।
यसको मतलब औसतमा होम आईपीएल कपाल हटाउने उपचारले उपचार गरिएको क्षेत्रहरूमा wan०-70 ० प्रतिशत अनावश्यक कपालको स्थायी कटौती प्रदान गर्दछ।
जहाँसम्म, त्यहाँ १०- re० प्रतिशत कपाल पुन: बृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ जुन माथि उल्लेखित विभिन्न कारकहरूको कारणले हो। केहि व्यक्तिहरूले अरू भन्दा चाँडो परिणामहरूको अनुभव गर्न सक्दछन्, जबकि केहि राम्रो परिणामको लागि आवश्यक सत्रहरूको संख्या पछाडि पनि मर्मत सम्भार उपचारको आवश्यक पर्दछ।
जहाँसम्म, कुनै पनी गृह आईपीएल कपाल हटाउने अन्य परम्परागत कपाल हटाउने विधिहरूको तुलनामा कपाल हटाउन एक स्थायी र अधिक प्रभावी विधि हो भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन। यद्यपि यसले १००% नतिजाको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन किनकि होम आईपीएल कपाल हटाउने प्रभावकारिता विभिन्न शारीरिक लक्षणहरूमा निर्भर गर्दछ, जुन कसैको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको हुन्छ।
जब परिणामहरू आश्चर्यजनक र चिरस्थायी हुन्छन्, र कपाल हटाउनका लागि हरेक अर्को हप्ता सलुनमा दौड्न कुनै दिक्क हुँदैन, तब होम आईपीएल हेयर रिमोभलिंग उत्तम विकल्प हो।
होम आईपीएल कपाल हटाउन कहिले सम्म रहन्छ?
होम आईपीएल कपाल हटाउने साथ अर्को चिन्ता यसको परिणाम हो, कि यो कति लामो हुन्छ?
जबकि त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि होम आईपीएल कपाल हटाउने उपचार जीवन को लागी तपाईलाई कपाल मुक्त बनाउछ, तर यसले दिगो परिणाम प्रदान गर्दछ। यो बुझ्नु आवश्यक छ कि प्रत्येक व्यक्तिले गृह आईपीएल कपाल हटाउने उपचारको लागी फरक फरक प्रतिक्रिया गर्दछ। जबकि केही व्यक्तिले कपालको बृद्धिमा १००% कटौतीको अनुभव गर्छन्, अरूले यसलाई 100० देखि 70 ० प्रतिशत बीचमा देख्न सक्छन्।
स्थायी परिणामहरूका लागि, अनावश्यक कपालमा स्थायी कटौती केवल गृह आईपीएल कपाल हटाउने मार्फत मात्र सम्भव छ जब कपालको कटाम नष्ट हुन्छ। यदि उपचारको क्रममा कपालको कपाल मात्र बिग्रन्छ भने, कपाल फेरि बढ्नेछ। कपालको पुन: वृद्धि दर एकदम परिवर्तनशील हुन्छ, किनकि केही व्यक्तिको लागि यो केहि महिना र बर्ष पछि हुन सक्छ, जबकि अरूलाई उनीहरूले कपाल हटाउनको लागि कहिले पनि महसुस गर्न सक्दैनन्।
कपालको पुन: वृद्धि समय व्यक्तिको कपालको चक्रमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, परिणामहरू व्यक्ति-व्यक्तिमा फरक हुन सक्छ। यो यस कारणले गर्दा हो कि प्राय जसो मानिसहरूलाई वार्षिक मर्मत सम्भारको आवश्यकता पर्दछ भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि कपालको पुन: वृद्धिको हरेक सम्भावना हटाइएको छ, जसले तपाईंलाई पूर्ण रूपमा सहज र कपाल मुक्त छाला दिन्छ।
अघिल्लो: आईपल कपाल हटाउने उपकरण घर प्रयोग र सौन्दर्य एजेन्सीको लागि आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण बीच के भिन्नता छ?
अर्को: वसन्त किन घर मा कपाल हटाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो मौसम हो?